Famoretana Ataon’ny Milina Mibaiko Tenan’ny Ayatollah Amin’ny Twitter, Ireo Mpanao Gazety No Mizaka Ny Tsy Natao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2016 4:06 GMT
Ho ampahany amin'ilay fanentanana #letter4u ho famaliana ireo fanafihana tao Parisy, niezaka ny Ayatollah Khamenei ao Iràna mba handòna ireo “tanora ao Eoropa sy Amerika Avaratra”. Marobe ireo milina mibaiko tena no manodina ankolaka ireo tenifototra hafa tsy misy ifandraisany amin'ilay fanentanana mba hampidirana sary toy ireto, na rohy mankany amin'ilay tena taratasy.
Ho setrin'ireo fanafihana tao Parisy tamin'ny 14 Novambra, dia nanohy ny ezaka nataony handònana “ireo tanoran'i Eoropa sy Amerika Avaratra” ny filoha faratampony ao Iràna, Ayatollah Khamenei. Taorian'ilay fanafihana ny Charlie Hebdo nitranga tamin'ny Janoary 2015 no nanomboka ity tetikasa ity. Lasa fantatra tsara tamin'ny fampiasàny milina mibaiko tena ilay fanentanana, mba hameno ilay tenifototra mifandraika amin'izany, #letter4U, izay nitarika ny Twitter ho tafiditra amin'ny lalaon'ny fangalampiery (saka sy ny totozy) ho fanafoanana ireny milina mibaiko tena ireny, niafara tamin'ity herinandro ity tamin'ny fampiatoana kaonty maro an'ireo Iraniana mpanao gazety sy mpandalina, izay nandefa tatitra tamin'ny fampiasàna tenifototra nitovy tamin'io.
Tamin'ny fisian'ireo “mpandefa hafatra tsy iriana” marobe nibitsika momba ny #Letter4U an'i #Khamenei, nisy anà mpanao gazety ihany koa ireo natsahatry ny Twitter @abasinfo, @SanamF24, @joaska_, @LeonEoW
Ny 29 Novambra i Khamenei no nanomboka ity ezaka fandònana ity, niaraka taminà andianà bitsika nampiasàna ny tenifototra #Letter4U, izay tonga hatramin'ny famoahana taratasy misokatra manazava ireo olan'ny fampihorohoroana sy ny antson'ny Daesh (fantatra koa amin'ny hoe ISIS) ho toy ny tsy fahombiazan'ny politikan'ny raharaham-bahiny ao Etazonia sy ireo mpiara-dia aminy — fomba filaza efa fantatry ny maro amin'ireo lahatsoratra alefany amin'ny media sosialy.
Bitter events by blind terrorism in #France once again moved me to speak to you young people. #ParisAttack #Letter4U pic.twitter.com/ndbSd3e2MS
Tranga mangidy nataon'ny fampihorohoroana anjàmbany tao Frantsa, nahatonga ahy hihetsika indray hiresaka aminao tanora
Full text of letter from Ayatollah Khamenei to the youth in western countries #Letter4U https://t.co/n5cehXs3dZ pic.twitter.com/NAkCNdnozk
Lahatsoratra feno ahitàna ny taratasin'i Ayatollah Khameini ho an'ireo tanora any amin'ny firenena Tandrefana
Tsy vao sambany ny iray amin'ireo ezaka fandefasana hafatra tsy niriana amin'ny alàlan'ny milina mibaiko tena sy mampiroborobo ny fampielezankevitra #letter4u ataon'ny Ayatolah ety anaty aterineto no nitondra ho amin'ny valinkafatra avy amin'ny Twitter. Raketin'ilay Amerikàna bilaogera, Morgan Carlson, ao anaty lahatsoratra am-bilaogy izay havaoziny matetika, mitondra lohateny hoe “Ireo milina mibaiko tena mpandefa hafatra tsy niriana avy amin'ny Ayatollah – The Ayatollah's Spam Bots,” ny fomba fiasan'ireny milina mibaiko tena ireny:
Misy kaonty anjatony maro, raha tsy anarivony aza, ny ankamaroan'izy ireny dia mandefa bitsika maherin'ny 10.000. 1.000 isanandro ihany no fetra apetraky ny Twitter ho azo alefa, ary toy ny noforonina tao anatin'io eritreritra io ireo kaonty ireo. Maro amin'ireo kaonty no mampiasa sary tsy tena izy nalaina avy any amin'ny toerana samihafa. Ny sasany amin'izy ireny mampiasa sarin'olo-malaza, mpanao gazety hafa na olo-malaza hafa amin'ny tontolon'ny fampahalalambaovao.
Tsikaritr'i Morgan ihany koa fa maro amin'ireo kaonty nomarihany ho toy ny milina mibaiko tena no natsahatry ny Twitter tao anatin'ilay vanim-potoana nanaraka avy hatrany taorian'ny fanombohan'ilay fampielezankevitra, na izany aza dia nisy andianà kaonty vaovao nipoitra tamin'ny Jona, fotoana nahamarihan'i Morgan izany, “ary tsy taitra ny Twitter”. Kanefa nanajanona tsikelikely ny hetsika nataony ireo milina mibaiko tena, fotoana fohy taorian'ny firongatry ny vanintaona mafàna. Tamin'ny Novambra, niaraka tamin'ny fampielezankevitra #letter4u an'i Khamenei, naverina nampiasaina ireny kaonty ireny. Raha ny marina ny sasany amin'ireo milina mibaiko tena ireo dia niezaka ny hijirika ireo tenifototra malaza sy ironana be mifandray amin'ny fanentanana letter4U, amin'ny fandefasana bitsika misy rohy mankany amin'ireo saripika misy hafatra mifandray amin'ilay taratasy misokatra, na tonga dia mampifandrohy fotsiny izao amin'ilay taratasy misokatra. Nahatsikaritra fehezana kaonty maromaro sy tenifototra nampifamatorina tamin'ny kaonty tsirairay tamin'izy ireny ilay Iraniana mpikaroka momba ny aterineto, Kevin Miston:
Raha toa ka mbola mitohy miasa sy tsy voasivana ireny kaonty ireny, kaonty Twitter Iraniana hafa malaza an'ireo mpanao gazety no tsy nànana izay vintana izay. Marobe ireo mpanangona vaovao no voabahana ao amin'ny Twitter noho ny nandefasany vontoaty mifandraika amin'i Khamenei sy ny fampielezankeviny. Ohatra, ilay Iraniana mpanao fandalinana politika, Adnan Tabatabai, nandefa rohy iray mankany amin'ny taratasy misokatra avy amin'i Khameini natao tamin'ny teny Anglisy, ary vokatr'izay dia voabahana.
Here's the English version of the letter “Today terrorism is our common worry”: https://t.co/82eUH8ZUDy #Iran #Khamenei #ParisAttacks
Ito ny dika amin'ny teny Anglisy tamin'ilay taratasy “Fanahiana iraisantsika rehetra ny fampihorohoroana amin'izao fotona izao”
Nitrangan'ny raharaha tahàka izany i Abas Aslani, talen'ilay Masoivohom-Baovao Ivelany Iraniana ao Tasnim. Nifandray tamin'i Aslani ny Twitter mba hampitandrina azy tsy hanitsaka ireo Fitsipiky ny Twitter ny bitsika alefany, raha nilaza kosa izy fa efa nahantony ireo bitsika niteraka ilay olana, narahana fampiatoana fanindroany.
Taorian'ny fampiatoana dia niverina indray, nolazain'ny Twitter fa mila ora iray vao tafaverina amin'ny toy ny teo aloha ny kaontiko
My tweet “full text of #Iran leader's letter to the youth in West re #ParisAttacks” has been deleted from my tweets. https://t.co/z4jbdm7LPF
Efa nofafàna tao anatin'ireo bitsika nalefako ilay bitsiko hoe “lahatsoratra feno tamin'ilay taratasin'ny mpitondra ao Iràna ho an'ireo tanora any Andrefana mifandray amin'ny resaka Fanafihana tao Parisy”
Nahanton'ny Twitter fanindroany indray ny kaontiko Twitter androany . Miezaka manao izay hanesorana ilay fampihantonana nefa ora iray no ilaina vao miverina izany
Hatramin'ny 30 Novambra, anefa, tsy nisy intsony ny tatitra momba ny fampihantonana kaonty tahàka izany, raha mbola manohy mizara sary sy tsonga avy amin'ilay taratasy misokatra nalefan'i Khomeni kosa ireo milina mibaiko tena mpandefa hafatra tsy niriana.